Brezila: Mba afaka hitondra fiara raitra ve ny mainty hoditra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2009 12:44 GMT
Tany amin'ny faran'ny volana Aogositra tany, nipongatra indray noho ny tranga iray nanaitra ny sain'ny maro manerana ny firenena mihitsy ny resaka fanavakavahana sy fitsarana ivelany eo anivon'ny fiarahamonina Breziliana . Januário Alves de Santana, lehilahy mainty hoditra iray eo amin'ny faha-telopolon'ny taonany eo, no voadaroky ny mpiambina roalahy raha iny izy niandry ny vady aman-janany teo amin'ny faritra fametrahana fiara tamina iray amin'irony toeram-pivarotana lehibe iraisampirenena any Brezila irony [toy ny Shoprite aty Madagasikara]. Nampangaina izy ho nikasa hangalatra ny fiara izay azy ihany [pt]. Ireo mpanafika azy dia nihevitra mazava fa hoe satria mainty izy dia tsy tokony ho afaka hanjifa Ford EcoSport ( karazana iray raisina ho isan'ny lafo vidy any Brezila).
Sary avy amin'i Juarez Silva Jr.
Rachel Glickhouse, avy amin'ny Adventures of a Gringa, dia mamaritra ny fizotry ny zava-nitranga tamin'ny 7 Aogositra amin'ny antsipirihany, araka izay nambaran'i Januário. Izy dia miblaogy amin'ny teny Anglisy:
Nijoro teo anilan'ny fiarany izy, voamariny fa nisy lehilahy roa mampiahiahy tamy nanatona azy. Avy eo ny iray– izay mpiandraikitra ny fiambenana ihany– nanatona azy sady namoaka fitaovam-piadiana. Tonga ilehio dia namely an'i Januário tsy nisy alaharo alaharo, ary Januário tsy nahalala akory na jiolahy io na mpitandro filaminana. Nandritra ny fifampitoloman'izy ireo, nianjo vonjy ireo mpandalo, ary i Januário dia nihevitra fa avotra izy. Mpiambina marobe avy ao amin'ny Carrefour no tonga nanatona, ary nazavainy fa resaka tsy mifankahazo izy ity– tsy nieritreritra izay hangalatra ilay kodiarandroa teo anila teo izy. Nosamborin'ireo mpiambina izy ary nentina niditra tanaty efitrano kely iray “hanazava” hoe inona no nitranga. “Raha izany,” hoy izy ireo, “ nangalatra EcoSport iray ianao ary avy eo mbola nihevitra ny haka kodiarandroa iray koa?”
Dia niditra tamin'ny fidarohana tsy ampieritreretana an'i Januário ireo mpiambina dimy, izay nambaran'ny tatitra voalohany ho “ampaham-potoana fampijaliana,”tehamaina, totohondry, ary vodibasy, daroka amin'ny nifiny ka nahatonga azy ho boba-rà. Januário nilaza fa niezaka ny hanazava ihany ny maha azy ny fiara izy, ary tao anatiny [toeram-pivarotana] tao ny zanany vavikely raha niantsena ny ankohonany. Tsy niraharaha azy ireo mpanafika azy. “Mangina, n*****. Rehefa tsy hangina ianao, hotapatapahako daholo ny taolam-batanao rehetra” hoy ny iray tamin'izy ireo nandrahona. Nikakakaka izy ireo rehefa nisisika izy nilaza fa azy ny fiara. Naharitra roapolo minitra teo ny faharetan'ny daroka talohan'ny nahatongavan'ny pôlisy.
Ary mbola nampiany fa “tsy nitsahatra hatreo akory ny fampijaliana”, fa na dia taorian'ny nahatongavan'ny pôlisy aza:
Iray tamin'ireo pôlisy, antsoina amin'ny anarana hoe Pina, no tsy nino ny “tantaran'i” Januário . “Sahala amin'ny olona efa nifonja matetika ianao e!. Alefa moa e, mba miaiky, ao izay an,” hoy ilay manamboninahitry ny pôlisy. Pôlisy iray hafa no tsy nino ny maha-olona mpisahana fiambenana azy teo aloha, ka dia nanomboka nanadina azy momba ny fitsipika fisahanana fiambenana. Farany , nandeha nankeny amin'ny fiaran'i Januário ilay pôlisy ary nanamarina fa azy sy ny vadiny tokoa ny fiara. Teo ny ankohonany, tohina mafy nahita azy vonton-drà sy vaky nify, ary ilay zanany vavikely mbola resin-tory tao anaty fiara.
Dia lasa fotsiny tsy niantso fiara mpamonjy voina na nanampy azy ny pôlisy. Nentin'ny ankohonany tany amin'ny hôpitaly, notsaboina noho ny dona sy ireo ratrany i Januário. Very 8 kilao izy hatreo, misedra tsy fahitan-tory ary tsy mbola afaka miverina mamonjy ny asany. Tamin'ny Alakamisy lasa teo, niatrika fandidiana ho fanitsiana ny taolana tapaka tao amin'ny karandohany izy. Nametraka fitoriana ny pôlisy ao an-toerana ny fianakaviany, saingy araka ny filazan'ny pôlisy, ny daroka nahazo azy dia vokatry ny “korontana” sy “ fifanjevoan'ny samy mpividy vitsivitsy”. Carrefour dia namoaka ny fialantsininy noho ilay resaka tsy nifankahazo ary nanambara fa vonona handray anjara amin'ny fanadihadiana[pt].
Na izany aza, i Januário dia mihevitra ny hitory eo anatrehan'ny fitsarana ilay vondron'orinasam-barotra sy ny Fanjakan'i São Paulo, sy hivarotra ilay fiara, izay mbola aloany R$789 isam-bolana [eo amin'ny $419 eo ho eo] , mandritra ny 72 volana.
Nanako nanerana ny firenena ilay tranga, ary maro ny olona naneho firaisankina tamin'i Januário, saingy tsy vao voalohany no nitrangan-javatra toy izao. Araka ny anasongadinan'ny blaogy [pt] Censurado [Voasivana, pt], fihetsika maro hafa manohintohina ny mainty hoditra no efa nataon'ireto olona mpiandraikitra fiambenana an'ity vondron'orinasam-barotra ity. Teny maneso no entin'ny mpitoraka blaogy manontany ireo mpamaky:
Te-hahazo toro-hevitra vitsivitsy avy aminareo mpamaky ahy aho. Raha mba te-hividy zavatra aho, shampoo, ambarao, ao amin'ny Carrefour, tokony hitondra namana fotsy hoditra ve aho hiaraka amiko?
Maria Frô [pt] mamerina mamoaka ny lahatsoratra momba ilay tantara navoakan'ny AfroPress [pt], sady manampy lohateny lehibe iray miventy ilay bestseller Breziliana“Não Somos Racistas” [tsy mpanavakava-bolon-koditra isika] an'ilay mpanao gazety Ali Kamel. Ny lohatenin'ny lahatsorany ao amin'ny blaogy dia:
Eny, raha ny lazain'i Kamel, tsy mpanavakava-bolon-koditra isika. Mpamono olona fotsiny ihany isika.
Ny blaogy Pão e Rosas [pt] dia manakiana mafy tokoa ilay tranga. Manaraka ny lalan-kevitra iraisana izy ity, miresaka ny anganongano manao hoe ny kolontsain'ny melting pot Breziliana dia demokrasia narindra ara-poko:
Raha mbola ny intelligentsia, ireo mpanao pôlitika bevozona sy ny media taka-bahoaka no misisika miteny hoe “tsy mpanavakava-bolon-koditra isika”, hipongatra foana ny zava-doza toy ity ary haneho amintsika ny fomba fisehon'ny fanavakavahana amin'ny endrika maherisetra sy mampahonena. Ny fifanoheran-kevitry faratampon'ny demokrasia ara-poko dia mifototra amin'ireo tranga toy ity, ary azontsika tanisaina ireo maro hafa nanohina tamin'ny fotoan'androny nefa dia adino mora foana avy eo, izay maro no tsy nahazo sazy akory.
Juarez Silva Jr., avy amin'ny Blog do Juarez [pt], dia manontany tena raha marina tokoa fa ny fanavakavahana mahazo ny mainty hoditra ao Brezila dia olana ara-tsosialy fa tsy ara-poko:
rehefa tsy mifanitsy amina lasitra “stereotype” iray sy “toerana ara-tsosialy” iray ny mainty hoditra dia “manefa” – izany eo ihany, raha toa [ilay zalahy ity] tsy nanana fiara raitra, angamba tsy nisy na inona na inona nitranga, sa tsy izany???? Trotraky ny antsojay satria ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina tsy mifanandrify amin'izay “andrasan'ny” fiarahamonina aminy, ilay niharam-boina eto dia mihevitra sahady ny hivarotra ilay “fiara nampidi-kizo” […]
Voararan'Andriamanitra aho tsy hametraka ny kodiaran'ny Adventure keliko [fiara io an] eto amin'ny toeram-piantsonan'ity vondron'orinasam-barotra ity… NDAO HANAOVANTSIKA ANKIVY ANDROANY E.
” Carrefour mpanavakava-bolon-koditra”, fanehoan-kery iray fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra natao amin'ny fitaratry ny fiara teo amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara ao amin'ny Carrefour. Sary nalain'i @berlitz ao amin'ny Twitpic
Ao amin'ny vohikala Geledés Instituto da Mulher Negra [Ivontoerana Geledés ho an'ny vehivavy mainty hoditra, pt], maro ireo olona sorena amin'ity vaovao ity ary niloa-bava namoaka ny alahelon'izy ireo ao amin'ny boaty fametrahana fanamarihana. Ohatra, milaza i Ayraon:
Aty Brezila irery ihany no heverin'ny olona ho miafina ny fanavakavaham-bolon-koditra. Hagaigena! Miafina fotsiny ho an'ireo tsy te-hijery azy izany. Amin'ny teny hafa, diso hevitra tamin'ny fomba fijeriny mivilana momba ny tenany ihany ny Breziliana. “Foko mifangaro isika!” hoy ny iray, “Tsy misy mainty na fotsy izany,” hoy ny iray hafa miteny, raha sendra misy olona [vahiny] mainty hoditra milaza fa nizaka fanavakavaham-bolon-koditra izy [na lahy io na vavy]. Any ivelany any, ho an'ireo mahafatantra hoe toy inona moa i Brezila dia tsy afaka hahatakatra hoe fomba ahoana no nanafenan'ity firenena ity nandritry ny fotoana elabe ny fanavakavaham-bolon-koditra tao aminy. Eto an-toerana, miara-miaina hadalana itambaram-be isika: ny fotsy hoditra mihevitra fa tsy misy zavatra toy izany hoe fanavakavahana izany fa zavatra foronin'ny mainty hoditra any an-tsainy any izany (dia ireo ‘mainty’ izay heverin'ny sasany ho toy ny tsy misy), ary ny mainty hoditra indray milaza fa ny fanavakavaham-bolon-koditra breziliana dia “misarom-boaly”; Maro no manaiky an'io teo-javatra io ( ary dia maro mihitsy ireo milaza fa tsy mbola niharan'izany fanavakavahana izany ry zareo, na dia lasibatr'izany isan'andro vaky izao aza). Ny tantaran'ity lehilahy avy any Bahia ity no tena nankarary saina ahy, satria dia hiverimberina ny toy io rehefa tsy misy fandraisana andraikitra avy amintsika. Sa mba hanao zavatra isika momba azy ity?
Ho valin'ny fanontaniana'ilay mpitoraka blaogy, nanomboka ireo hetsika fanoherana. Nisy fanehoankery natao ny 22 Aogositra, ary raha ny nambaran'ny Geledés dia hetsi-panoherana lehibe iray hanoherana ilay vondron'orinasam-barotra no hatao ny 5 Septambra.
Olana saro-bahana ny fanavakavaham-bolon-koditra ho an'ireo firenena nozanahan'ireo tany mandroso sy niaina teo ambany vahohon'ny fanandevozana; mbola betsaka ny antsojay mipoitra any anatin'ny fiarahamonina maoderina any. Nanamarika an'i Brezila ny fanandevozana mahery setra natao ireo Afrikana mainty hoditra, izay naharitra efa ho 300 taona ary, hatramina dingana iray voafaritra, dia kitro nifaharan'ny toekarena nandritry ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany. Nandova izany holatra ara-tsosialy izany ireo mainty hoditra aty amin'izao fotoana izao ary miaritra amin'ny endrika samihafa ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Nefa sakafom-panahy ho an'ny saina, ary ventiny ho an'ny hafatra hafa io.
Hafatra nandalo fanamarinan'i Maisie Fitzpatrick.